Hollow Polycarbonate စာရွက်
Pultrusion profile များကို
အရည်အသွေးမြင့်သော Polycarbonate ...
လှပသောဒီဇိုင်းမူလစာမျက်နှာ Garde ...
Smooth Surface Pultruded FR ...
FRP GRP ဖန်မျှင်ထည်ပလတ်စတစ် ...
Polycarbonate Plastic / Hollow Sheet ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ
ထုတ်ကုန်၏ဝိသေသလက္ခဏာများထိုးဖောက်မှုနှုန်း - ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များတွင် ၂၅% နှင့် ၈၆% အထိရောက်ရှိနိုင်သောမြင့်မားသောထိုးဖောက်မှုနှုန်း။ သက်ရောက်မှုခုခံမှု - ဆွန်းကော်လံရှိသက်ရောက်မှု၏ပြင်းထန်မှုသည်ဖန်ထည်၏အဆ ၈၀ ဖြစ်သည်။ ခွန်အား - နာရီ ၄၀၀၀ အရှိန်မြှင့်အိုခြင်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် Yi သည် ၂ ဖြစ်ပြီး LT မှာ ၀.၆% ဖြစ်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု ၁၀ ​​နှစ်ကြာမြင့်ပြီးနောက်ထိုးဖောက် ၀ င်မှုနှုန်းနှင့်အဝါရောင်နိမ့်ကျမှုများကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်မှကာကွယ်ခြင်း: ပီစီဆိုလာမီးသီးများသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအလွှာသုံးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသော Polycarbonate Solid PC Board ဘုတ်စွမ်းအားဘုတ်
လှပသောဒီဇိုင်းအိမ်ဥယျာဉ်သုံးခြင်း PC ဖန်လုံအိမ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ၁။ သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြစ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံး ၂၄ နာရီတွင်အွန်လိုင်းမှဖြေပါ။ ၂။ သင်၏မေးခွန်းများအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်အတွေ့အကြုံရှိသော ၀ န်ထမ်းများစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း ၁ ။ ၂။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုလီကာဗွန်နိတ်ဘုတ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးသင့်သတင်းအချက်အလက်အတွက်အကြံပြုချက်များပေးလိုပါသည်။ Q: နမူနာတစ်ခုကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။ A: အခမဲ့နမူနာများအနေဖြင့်သင်ပို့ဆောင်ပေးရမည့်ငွေပမာဏကိုသာပေးရမည်။ Q: ငွေပေးချေမှုကိုဘယ်လိုလက်ခံမလဲ။ A: ငွေလွှဲလက်ခံခြင်း ...
စိတ်ကြိုက်စက်ရုံအရည်အသွေးမြင့်မားသော Polycarbonate PC ကိုစာရွက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြိုတင်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ၁။ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း ၂ ။ ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း။ နမူနာများကို ၇ ရက်အတွင်းပေးပါ။ ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှု ၁။ အချိန်တိုတို ၂။ တပ်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက် ၃။ ၂၄ နာရီတိုင်ပင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ၄။ အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း။ အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့်စနစ်များထုတ်လုပ်ခြင်း။ ထပ်မံတောင်းခံလျှင်ယခင် (၅) ဦး၊ တစ် ဦး ချင်းနှင့်အညီအမျှမှတ်တမ်းများ (၅) ခုပါရှိသည်။
အရည်အသွေးကောင်းအပူပေးလျှပ်ကာသိုလှောင်ရုံမြှင့်ပလပ်စတစ် PVC စာရွက်
ကုန်ပစ္စည်းများထူးခြားချက်များကြာရှည်ခံသောအရောင် (အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်) ကုန်ပစ္စည်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်ကြာရှည်ခံနိုင်မှုရှိသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုပြင်းထန်သောအခြေအနေများ၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်အေးခဲခြင်းတို့ကြောင့်တည်ငြိမ်သောအရောင်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော Anti-Corrosion Performance Synthetic Resin Tile သည်တာရှည်အက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီနှင့်ဆားချေးများကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည်။ ..
ဂျယ်လ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော FRP စာရွက်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်ထုတ်လုပ်ထားသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပူပျောက်ကင်းသောဂျယ်လ်ကုတ်အင်္ကျီ၊ ဒြပ်အစေးနှင့်ဖန်မျှင်ထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောကား၊ ရေခဲသေတ္တာနှင့်သန့်ရှင်းရေးထရပ်ကားများ၊ ဆေးကုသမှု၊ အစားအစာသန့်ရှင်းရေးနှင့်အခြားစီမံကိန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောအရည်အသွေးရှိထုတ်လုပ်သူများနှင့်စျေးနှုန်းအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ထုတ်လုပ်သောသူတို့တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရှိသည်။ တဖန်သင်တို့ကျေနပ်ရောင့်ရဲပြီးတဲ့နောက်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုပြည့်စုံခြင်းကပြီးဆုံးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိပေးပါတယ်။ ခိုင်ခံ့သောချေးခံနိုင်ရည် o ...
Smooth Surface Pultruded FRP ပလပ်စတစ်ပြားပြား
အင်္ဂါရပ်များ ၁) ဖိုက်ဘာမှန်မှန် ၂၇% မှ ၃၀% အထိပါဝင်သည်။ ၂) ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးစွမ်းရည် ၃) ကောင်းမွန်သောအဝါရောင်ခုခံနိုင်မှု ၄) ခိုင်ခံ့သောသက်ရောက်မှုရှိခြင်းနှင့်ကွေးနိမ့်နှုန်း ၅) အပူချိန်အလွန်မြင့်မားစွာ -38 ဒီဂရီ +၁၁၀ ဒီဂရီကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ၆) အိုမင်းခြင်းခံနိုင်ရည် - F4 သတ်မှတ်ထားသောရုပ်ရှင်ကားပေါ်တွင်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ ရှည်လျားသောလွန်ခဲ့တဲ့မျက်နှာပြင်နှင့်ခံနိုင်ရည်ဂျယ်လ်ကုတ်အင်္ကျီ။ ဖန်မျှင်ထည် grp frp အမိုးမိုးစာရွက်။ ပစ္စည်းများ: ဖန်မျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလပ်စတစ်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွဲ့စည်းထားသောစက်အပလီကေးရှင်း FRP ခေါင်မိုးများရေစိုခံခြင်း။
သင်လိုအပ်သည့် FRP Bonai Corrugated Fiberglass စာရွက်စက်ရုံ GRP
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Fiberglass roofing sheet (Fiberglass ပစ္စည်းပလပ်စတစ် tile သို့မဟုတ် FRP skylight corrugated roof panel) သည်ဖိုက်ဘာမှန်အားအမာခံများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလေးချိန်အချိုးအစား။ PVC သို့မဟုတ်သစ်သားများနှင့်မတူသည့်ဤထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်၎င်းသည်သက်ရှိအားလုံး၊ အာကာသ၊ ရထားလမ်း၊
ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တရုတ်စက်ရုံစိတ်ကြိုက် FRP Fiberglass Grating
ဖန်မျှင်အားဖြည့်ပလပ်စတစ် (FRP) ဆန်ခါနှင့်ဖန်မျှင်အမျှင်ပလပ်စတစ်ပြားများသည်ဖန်ထည်အားဖြည့်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့်ဖန်ထည်အားဖြည့်သည့်အပိုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သံချေးများကာကွယ်ခြင်းနှင့်မီးလျှံတားခြင်း၊ သံလိုက်အားဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းမရှိသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ချေးသောပတ်ဝန်းကျင်၏ကြမ်းပြင်၊ တုတ်ကျင်းအဖုံး၊ ပလက်ဖောင်း၊ သင်္ဘောကုန်းပတ်၊ လှေကားထစ်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
FRP GRP ဖန်မျှင်ထည်ပလပ်စတစ်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်း
အလယ်ပိုင်း slot က linear U အမျိုးအစားရေနုတ်မြောင်းရုပ်သံလိုင်းယိုစီးမှု plug ကိုအတူအတူတကွ outfall ပြီးပြည့်စုံသောရေနုတ်မြောင်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ရေနုတ်မြောင်းလိုင်းများတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များစွာရှိပြီးသင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆောက်လုပ်ရေး၊ မြို့ပြတည်ဆောက်ရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ဥပမာအားဖြင့်လေဆိပ်၊ ဆိပ်ကမ်း၊ ပန်းခြံ၊ အားကစားကွင်း၊ လမ်းကြောင်းများစွာ၊ စတုရန်းရေနုတ်မြောင်း၊ လမ်းရေနုတ်မြောင်းစသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေနုတ်မြောင်းဖုံး၏ပစ္စည်း grp frp Solicitud 1. Decoración ...
FRP Purlin ဆောက်လုပ်ရေးရည်ရွယ်ချက် Purlin စျေး
လျှောက်လွှာ ၁) ။ Purlins, သံမဏိဆောက်လုပ်ရေးအတွက်နံရံထုပ် 2) ။ ပေါ့ပါးသောခေါင်မိုးများ၊ ကွင်းခတ်များစသည်တို့ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့တည်ဆောက်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အလင်းရောင်စက်ယန္တရားများထုတ်လုပ်သည့်ကော်လံများ၊ ထုပ်များနှင့်လက်နက်များအဓိကအင်္ဂါရပ်များသဘာဝနှင့်ချောခြင်းပုံသဏ္:ာန် - သဘာ ၀ သွင်ပြင်နှင့်ချောမွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သဘာဝသဲကိုမျက်နှာပြင်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ချေးခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းခံနိုင်ရည်: ဗဓေလသစ်၏ဂုဏ်သတ္တိများကွာခြားချက်သည် FRP အားကွဲပြားသောချေးခြင်းခံနိုင်မှုကိုပေးသည်။
ပေါင်းစပ် FRP ဖိုက်ဘာမှန် I-Beam ကိုပရိုဖိုင်း
၁။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုသူတို့မပို့မီဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်စစ်ဆေးမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရန်အာမခံပါသည်။ 2. ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းစျေးနှုန်းသည်ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရေအတွက်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၃။ ကျွမ်းကျင်မှုကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ၄။ အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအကြောင်းသင်၏မေးမြန်းခြင်းအားလုံးအတွက် ၁၂ နာရီအတွင်းသင့်ကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။ ၅။ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးပြီး ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးသည်စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ရရှိမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်စာကိုထားခဲ့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းပြန်ကြားမည်။
လိပ်စာGongcun, Dacheng, Langfang City, တရုတ်